Soomaali / Bartayaasha Qeybta Luuqada Ingiriiska
Bartayaasha Qaybta Luqadda Ingiriiska
Waa maxay EL?
Barashada luuqadda Ingiriiska (EL ) waa barnaamij K-12 baraya afka luqadda Ingiriiska ardayda afkooda hooyo uu san ahayn Ingiriiska. Ardayda waxaa wax baraya macalimiin EL oo haysta shatiga ama leysinka macalinimada oo isticmaalayo hab la mid ah kan ay wax ku baraan afka qalaad dadka kuhadla luqadda af Ingiriiska. Barnaamijkayaga hadda waxaa ka mid ah in ka badan 2,000 oo arday, oo matalaya 41 luqadaha aan Ingiriisiga ahayn. Iskuulada waa in ay bixiyaan fursado waxbarasho oo loo siman yahay dhammaan ardayda oo dhan. Ku guuldareysiga caqabadooyinka luuqadaha ayaa hor istaagi kara sinaanta kaqaybgalka waxbarashada.
Sidee ardayda ugu qalmaan adeegyada EL?
Arday kasta oo muujinaya luuqad aan ahayn Ingiriis oo looga hadlo guriga, qoyska, saaxiibada ama hore u bartay ayaa ah mid la tijaabinayo iyadoo la raacayo sharciyada ama qaanuunka hada. Ardayda yar yare ee (Kindergarten) ama lagu barbaariyo Iskuulka ee ka hooseeya golaha heer aqoon sare ee qiimeynta xirfadaha ku hadalka iyo qorista ayaa waxay u diiwaangashanyihiin barnaamijka EL ee degmada. Fasalka Koowaad ilaa fasalka laba iyo tobnaad ee ka hooseeya golaha heer aqoon sare ee ku hadalka, dhegaysiga, akhriska ama qeybo ka mid ah qaymeynta Qoraalka ayaa waxay ka diiwaangashanyihiin barnaamijka EL ee degmada. Dhammaan ardayda EL waxa la qiimeeyaa ama latijaabiyaa sanad kasta si loo ogaado koritaanka iyo horumarka tacliineed.
Waa kuwee Degmooyinka Iskuulada742 ee bixiya barnaamijyada EL?
Heerka waxbarashada Iskuulka hoose , Iskuulada Discovery, Madison, Oak Hill , Talahi iyo Westwood aya bixiya waxbarashada EL. Heerka Iskuulka sare, North Junior High , South Junior High, Iskuulka Sare ee Tech iyo Iskuulka Sare Apollo ayaa iyagana siiya ardayda adeegayada EL.
Luuqadaha Matala Barnaamijka?
Qaar ka mid ah 39ka luqadood ee matala barnaamijka waa: Carabi , Bengali , Kamboodiya , Shiinaha , Croatian , Faransiis , Ibo , Indonesia , Nepal , Japan , Kuuriyaan , Laoshiyaan , Oromo , Poland , Portugal , Ruush , Soomaali , Isbaanish , Sawaaxili , Tagalog , Thailand , Urdu , iyo Vietnamese.
Sidee fasalada EL u habaysanyihiin?
Iskuulada hoose EL: Iskuulada hoose, EL waxay isticmaalaan qaab ama hab gudaha ama dibada fasalka ah oo ay ardayga waxkubaraan. Ardayda Luqadda Ingiriiska barata waxay ka baxaan fasalkooda joogtada ah maalin walba si ay waqti ugu qaataan waxbarashada EL. Xaddiga ama cadadka waqtiga ardaygu helo waxbarashda Ingiriiska ah waxay ku xirantahay heerka aqoonta luqada ee ardaygu leeyahay. Waxbarashada waxay diirada saaraysaa horumarinta luqadda Ingiriisiga xoojinta iyo kordhinta erayada , fahamka akhriska iyo xeeladaha , xirfadaha qoraalka, iyo fahamka dhaqanka.
Iskuulada Sare EL: Iskuulada sare North, South, Tech iyo Apollo, ardayda baraneysa luqadda Ingiriiska EL waa arday isku koox ah marka loo fiiriyo sidey yihiin heerka aqoonta luqada. Fasallada waa kuwa bilow ah, dhexe, iyo kuwa sare. Tilmaantu waxay ku tusineysaa ardayda biloowga ah ineey bartaan luuqadda Ingiriiska ugu yaraan Saddex saacadood maalin walba; Horu u socod wanaagasan haduu ardayga sameeyo waqtiga EL ka waa ladhimayaa fasalada kale ama maadooyin kale ayaa lagu da rayaa . Ardaydu waxay helayaan credit fasallada EL ka oo dhan.
Goorma ayey ardeydu ka baxayaan barnaamijka?
Ardayda waxay uga baxaan barnaamijka EL iyagoo hela aqoon sare oo ku saabsan shaqada maalin kasta ee fasalka joogtada ah iyo fasallada EL, kuna guuleysanaya imtixaanada heerarka sare iyo kuwa kale , iyo waliba ineey keenaan masraxyada looga baahanyhay waqtiga qalin jabinta.